Ny sakafo hariva farany nataon'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Ny Sakafo Harivan'i Jesosy farany
Noheverina ho sakafo farany niarahan'izy ireo niaraka tamin'i Jesosy talohan'ny nahafatesany, saingy tsy fantatry ny mpianatra izany. Nihevitra izy ireo fa niara-nisakafo niara-nipetraka tamin'ny fankalazana ny fisehoan-javatra lehibe tamin'ny lasa kanefa tsy nahalala fa nisy hetsika lehibe lavitra teo. Tranga iray nahatanteraka izay rehetra nambaran'ny lasa.
Hafahafa hafahafa. Nisy zavatra tsy nety, tsy azon'ireo mpianatra namoaka izany. Voalohany, nanasa ny tongotr'i Jesosy, manaitra sy mahatalanjona izany. Marina, faritra maina sy vovoka i Jodia any ivelan'ny fotoanan'ny orana. Na ny mpianatra manana fanoloran-tena marina aza dia tsy hieritreritra ny hanasa ny tongotry ny mpampianatra. Tsy te hahafantatra i Petera fa nanasa ny tongony ny tompony mandra-panazavain'i Jesosy ny tanjon'ity tetikasa ity.
Nandritra ny fotoana kelikely dia taitra be i Jesosy rehefa nilaza tamin'izy ireo fa ny iray amin'izy ireo dia hamadika azy. Inona? Iza avy? Nahoana? Alohan'ny ahafahan'izy ireo nieritreritra momba izany bebe kokoa dia nilaza izy fa hanomezam-boninahitra an-drainy ny rainy ary hamela azy ireo tsy ho ela izy.
Ary hoy izy nanohy: Omeko didy vaovao ianao, mifankatiava tahaka ny nitiavako anao! Ankehitriny takatr'izy ireo fa teny mavesatra ireo. Tiavo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny namanao tahaka ny tenanao.Fa vaovao no nolazain'i Jesosy. Matetika i Peter dia sarotra ny nitia. Jaona dia tsy nantsoina hoe zanaky ny kotroka na inona na inona. Nanontany ny zava-drehetra i Tomà ary i Jodasy dia nitarika ny kaonty vola. Mifankatia indrindra amin'ny fitiavan'i Jesosy ny fitiavan'izy ireo. Toa izany no fototry ny tiany hazavaina aminy. Betsaka noho izany. Nantsoin'i Jesosy hoe sakaizany izy ireo, nefa tsy noheveriny ho mpanompony na mpanara-dia azy akory.
Nihinana zanak'ondry roana, ahitra sy mofo mangidy izy ireo, narahin'ny vavaka natao hahatsiarovana ny famonjen'Andriamanitra lehibe teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Indray hariva dia niainga i Jesosy ary nanao zavatra tanteraka tampoka. Namaky mofo izy ary nilaza tamin'izy ireo fa vatany tapaka izany. Naka divay izy ary nilaza tamin'izy ireo fa ilay kapoin'ny fanekena vaovao amin'ny rany. Saingy tsy fantatr'izy ireo fa tsy misy fanekena vaovao, izay tena nahagaga.
Hoy Jesoa tamin'i Filipo: Raha nahita ahy ianao dia nahita ny rainy. Lazao indray? Reko ve izany? Dia notohizany: Izaho no lalana, fahamarinana ary fiainana. Avy eo dia nanantitrantitra indray izy fa nandao azy fa tsy namela azy ho kamboty. Handefa mpanentana hafa ho azy ireo, mpanolotsaina izy ireo, mba hiaraka amin'izy ireo. Hoy izy: Amin'izao andro izao dia ho hitanao fa ao amin'ny raiko aho, ianao ato amiko, ary Izaho ao aminao. Vanon-tsambo iray izay nanenona ny mpanjono rehetra poeta izy io.
Na inona na inona ny dikany feno, nanao fanambaràna mahagaga izy mikasika ny fonenan'ny Fanahy ao amin'ny Kristiana. Nampifandraisiny tamin'ny firaisan'ny ray tamin'ny zanany sy ny zanany izany zavatra izany. Mbola taitra be ry zareo tamin'ny fomba niantsoan'i Jesosy ny tenany ho Zanak'Andriamanitra nandritra ny asany. Nohazavainy tamin'izy ireo fa amin'ny maha mpianatr'izy ireo dia mizara ny fifandraisan'ny zanany amin'ny maha zanaka izy amin'ny fifandraisana amin'ny rainy, ary mifandray akaiky amin'ny fitiavany azy ireo izany.
Ny fahitana ny tanimboaloboka, ny voaloboka sy ny voaloboka dia mbola velona. Tokony hiaina sy hiaina ao amin'i Kristy izy ireo, tahaka ny fiainana amin'ny sampana voaloboka. Tsy nanome baiko na ohatra fotsiny i Jesosy, fa manome fifandraisana akaiky azy ireo. Tianao ny fomba itiavany azy amin'ny fizarana ny fiainany sy ny fitiavany ny rainy!
Na izany aza dia toa hita ny fahitana raha nilaza i Jesosy fa fiainana mandrakizay ny fahalalana ny Ray sy ny Zanaka. Nivavaka ho an'ireo mpianatra sy izay rehetra hanaraka azy i Jesosy. Ny vavaka nataony dia ny momba ny firaisana, ny iray miaraka aminy ary Andriamanitra Ray. Nivavaka tamin'ny rainy izy mba ho iray ihany, toy ny maha iray azy ao aminy.
Tamin'io alina io, izy dia tena namadika, nalaina an-keriny ny miaramila sy ny manampahefana, nampijalina, niharan'ny fitsaram-bahoaka, ary nogadraina izy ary natolony tamin'ny hazo fijaliana. Ny karazana fahafatesana ratsy indrindra ho an'ny mpanao heloka bevava. Ny fanantenan'ny mpianatra sy ny nofiny dia nofoanana sy potika tanteraka. Nihorakoraka tanteraka izy ireo, fa nionona tany amin'ny efitrano iray ary nohidiana ny varavarana.
Ny vehivavy ihany anefa dia nitomany sy nitebiteby teny am-pasana vao marainan'ny alahady maraina fa vao nahita ilay fasana tsy nisy! Nisy anjely nanontany azy ireo hoe nahoana izy ireo no nitady ny velona teo amin'ny maty. Hoy izy tamin'ireo: Jesosy efa nitsangana, velona izy! Toa tena marina ilay izy. Tsy nisy teny afaka namaritra an'izany. Saingy tsy nino izany ireo mpianatra lahy raha tsy nijoro tamin'ny fomba mahagaga i Jesosy teo amin'ny vatany be voninahitra. Izy dia nitso-drano azy ireo tamin'ny fiarahabana: "Fiadanana ho anao!" Jesosy nanonona teny feno fanantenana: "Raiso ny Fanahy Masina". Mbola nijanona io fampanantenana io. Amin'ny alàlan'ny firaisana aminy amin'ny maha-olombelona, ​​amin'ny fahatongavany ho olombelona ary ny fanekeny ny fahotan'ireo olombelona rehetra dia tsy mbola nifandray tamin'ny tsy misy fahafatesana izy. Ny fampanantenana dia mitoetra ao anatin'ny fiainany vaovao nitsangana, satria izy no nanamboatra ny lalana ho amin'ny fampihavanana, famonjena, ary fanekena ny maha-olombelona amin'ny fifandraisany amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Nanangana ny olona rehetra i Jesosy tafatsangana amin'ny maty mba handray anjara mivantana ao amin'ny vondrom-piangonana Trinite.
Hoy Jesosy taminy: Tahaka ny nanirahan'ny Ray ahy no anirahako anareo. Ireo mpianatra voalohany dia nanao izany tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny firaisana ara-panahy fotsiny.Ny hafaliana, fisaorana, ary ny vavaka dia nitory ny vaovao tsaran'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy ny fiainana vaovao ao amin'ny fanekena vaovao izy, fiainana ao amin'i Jesosy Kristy.
Ry mpamaky malala koa, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina no ahafahanao manana ilay fifandraisan'ny zanany lahy amin'ny rainy Fiainana anaty. Izy dia nitahy azy ireo tamin'ny firaisan'Andriamnitra, amin'ny fifandraisana amin'ny olona ary amin'Andriamanitra telo izay misy mandritra ny mandrakizay.
Nataon'i John McLean